जापान मा यात्रा को लागी १० सर्वश्रेष्ठ यात्रा कार्यक्रम! टोकियो, माउन्ट फुजी, क्योटो, होक्काइडो ... - Best of Japan
सर्वश्रेष्ठ यात्रा कार्यक्रम - एडोब स्टक
जब तपाईं जापान जानुहुन्छ, तपाईंले जापानमा कुन ठाउँमा जान चाहनुहुन्छ भनेर निर्णय गर्नुपर्नेछ। यसैले यस पृष्ठमा म गन्तव्यहरू परिचय गर्ने छु जुन सम्भवत जापानमा भ्रमण गर्ने मुख्य ठाउँहरू हुनसक्दछन्। यदि तपाईंसँग विशेष रूपमा जान चाहानु भएको स्थान छ भने, तपाईं ठाउँको चारै तिर यात्रा योजनाको निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ। तलका प्रत्येक नक्सामा क्लिक गर्नुहोस्, उक्त स्थानको लागि गुगल नक्शा छुट्टै पृष्ठमा प्रदर्शित हुनेछ, त्यसैले कृपया यसलाई सन्दर्भित गर्नुहोस्।
टोक्यो: दुबै परम्परागत र आधुनिक चीजहरूको आनन्द लिनुहोस्!
होक्काइडो: सप्पोरो + जहाँ तपाईं अधिक जान चाहानुहुन्छ!
माउन्ट फुजी: यो गोटेम्बा प्रीमियम आउटलेटहरू द्वारा रोक्न मजाको कुरा हो
शिराकावागो र टकायामा: जाडोमा विशेष गरी अचम्मको
कनाजावा: परम्परागत जापानी संस्कृतिको अनुभव लिनुहोस्!
क्योटो: नाराको लागि दिन यात्रा पनि सम्भव छ
ओसाका: गउरमेन्ट भ्रमण सिफारिस गरियो!
हिरोशिमा: मियाजीमा र हिरोशिमा पीस संग्रहालय
फुकुओका र युफुइन: सडक गउरमेट र ओन्सेनको अनुभव
ओकिनावा: भाँडा-कार कार समुद्री किनार र आकर्षणहरूको
टोकियो जापानको राजधानी हो करीव करीव १ करोड जनसंख्याको जनसंख्या। टोकियो मेट्रोपोलिटन क्षेत्र वरपरको क्षेत्र सहित करीव 13 million करोड मानिसहरु को जनसंख्या छ। यो क्षेत्र जापानको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रुपमा केन्द्रित छ। यदि तपाईं जापान मा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, म यो विशाल शहर छोड्ने सल्लाह दिन्छु। सुरक्षा धेरै राम्रो छ। किनकि ट्रेन र सबवे सहि हिंडिरहेका छन्, यातायातको सुविधा पनि धेरै राम्रो छ।
टोकियोमा, तपाईं दुबै जापानी परम्परागत र नवीन चीजहरूको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं शहर टोकियो, Asakusa मा जानुहोस्, तपाईं पुरानो मन्दिरमा केन्द्रित परम्परागत परिदृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। अर्कोतर्फ, यदि तपाईं अकिहाबारा वा शिबुया जानुहुन्छ भने, तपाईं जापानी पप संस्कृति अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ।
निम्न भिडियोले टोकियोको बारेमा राम्रो वर्णन गर्दछ।
ह्युस टेन बॉश जापानको नागासाकीमा थिम पार्क हो जुन पुरानो डच भवनहरू = शटरस्टकको वास्तविक आकारको प्रतिलिपिहरू प्रदर्शन गरेर नेदरल्याण्ड्सलाई पुनःभेट ​​गर्छ।
होक्काइडो जापानको उत्तरी भागमा पर्ने सबैभन्दा ठूलो टापु हो। लगभग १ 150० बर्ष भयो जब जापानीहरूले यस टापुको पूर्ण विकास गरे र बस्न थाले। यस कारणका लागि, त्यहाँ धेरै क्षेत्रहरू छन् जहाँ उजाडस्थान र मूल जंगल फैलियो। खेती गरिएको भूमि र चराउने क्षेत्र पनि अन्य जापानी क्षेत्रहरूको तुलनामा धेरै प्रशस्त छ। त्यसोभए, यदि तपाईं होक्काइडो जानुहुन्छ भने, तपाईं भव्य प्रकृति र विशाल फूल बगैंचाको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
होक्काइडो को केन्द्र साप्पोरो हो। यस शहर मा, "सप्पोरो हिउँ महोत्सव" प्रत्येक फेब्रुअरी मा आयोजित हुन्छ, र माथिको चित्र जस्तै विशाल हिम प्रतिमाहरु व्यवस्थित छन्। सप्पोरो सुन्दर शहर हो, ग्रीष्म relativelyतु पनि राम्रो छ। रमेन र "चंगेज कान" जस्ता खाना पनि स्वादिष्ट हुन्छ। यदि तपाईं होक्काइडो जानुहुन्छ भने, म सिफारिश गर्दछु कि तपाईं साप्पोरो पहिले भ्रमण गर्नुहोस्, त्यसपछि अन्य स्की रिसोर्ट्स, फूल बगैंचा, हिमाली क्षेत्रहरू आदिमा जानुहोस्। अवश्य पनि, म स्की रिसोर्टहरू र अन्यबाट पनि सफोरोबाट रोक्नको लागि सिफारिस गर्दछु।
होक्काइडोलाई टोकियो र ओसाकाबाट उडान गर्न सकिन्छ। होक्काइडोको आन्दोलन धेरै समय लिइरहेको छ यदि यो ट्रेन हो भने, हामी प्राय: जसो हवाईजहाजहरू प्रयोग गर्दछौं।
माउन्ट फुजीको नक्शा
माउन्ट फुजी जापानको सब भन्दा अग्लो पहाड हो र उचाई 3376 100 मीटर छ। यो टोकियोबाट करिब १०० किलोमिटर पश्चिममा छ। यो धेरै कोमल र सुन्दर पहाड हो। तपाईं गर्मी मा माउन्ट फुजी चढ्न सक्नुहुन्छ। पर्वतारोहण कठिन छ, जम्पहरू जस्ता उपकरणहरू पनि आवश्यक छ। यद्यपि माउन्ट सम्म कोही पनि बसमा जान सक्दछन्। फुजी, त्यसोभए यदि तपाइँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने, तपाइँ टोकियोबाट बस यात्रा लिन सक्नुहुन्छ।
यदि तपाई माउन्टमा पुग्नु हुन्न भने पनि। फुजी यति धेरै, तपाई माउन्टको दृश्यको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। विभिन्न कोणबाट फुजी। विदेशी पर्यटकहरू माउन्टेटको नजिकको ताल, कावागुचिकोको किनारमा रहेको एउटा होटलमा बस्ने योजनासँग लोकप्रिय छन्। फुजी, र माउन्ट हेर्नुहोस्। ओन्सेनबाट फुजी (तातो स्प्रि .हरू)। म तपाईलाई माउन्ट हेर्ने बेला किनमेल गर्ने योजना सिफारिस गर्दछु। माउन्ट नजिकै विशाल आउटलेट मल "गोटेम्बा प्रीमियम आउटलेट" मा फुजी फुजी
किनभने माउन्ट फुजी तुलनात्मक रूपमा टोकियोको नजिक छ, यो राम्रो हो कि यसलाई तपाईंको यात्रामा टोकियोबाट छोटो यात्राको साथ समावेश गर्नु राम्रो हो।
यदि तपाइँ आपत्ति मान्नुहुन्न भने कृपया तलका लेखलाई पनि सन्दर्भ गर्नुहोस्।
विश्व विरासत साइट Shirakawago गाउँ र शीतकालीन रोशनी
शिराकावागो एक सुन्दर बस्ती हो जहाँ धेरै परम्परागत जापानी घरहरू बाँकी छन्। यी घरहरूमा "गाशो-दुकुरी" भनिने छतको संरचना हुन्छ र छानाको आकार एकदमै तीखो हुन्छ ताकि हिउँ तल झर्न सजिलो हुन्छ। यो गाउँलाई युनेस्को विश्व सम्पदाको रूपमा चयन गरिएको छ।
किनभने शिराकावागो भारी हिउँको क्षेत्रमा छन्, यदि तपाईं जाडोमा जानुहुन्छ भने, तपाईं माथिको जस्तो शुद्ध सेतो हिउँ दृश्यको मजा लिन सक्नुहुन्छ। Shirakawago मा आवास सुविधा छ। यो टोक्यो बाट Shirakawago सम्म ट्रेन र बस को लागी6घण्टा लाग्छ। ओसाकाबाट करिब hours घण्टा जति छ। यो लगभग १ घण्टा १4मिनेटको बसबाट बस शिराकावागो बाट कानाजावा सम्म छ। त्यसैले शिराकावागो दर्शनीय स्थलहरु पछि बस कानाजावा जाने पनि सम्भव छ।
जब तपाईं शिराकावागो जानुहुन्छ, तपाईं बाटोमा टाकायामा भन्ने परम्परागत शहर हुँदै जानुहुन्छ। टाकायामा शान्त र सुन्दर शहर पनि हो, यो विदेशी पर्यटकहरूका बीच धेरै लोकप्रिय छ। किनभने त्यहाँ तातो स्प्रि withहरू भएको होटलहरू छन्, तपाईं टाकायामामा बस्न सक्नुहुन्छ।
कनाजावा को नक्शा
कानाजावा मध्य होन्शुको जापान सागर छेउमा अवस्थित एउटा शहर हो। यो शहरको पुरानो शहर दृश्य छ र यो धेरै सुन्दर छ। माथिको तस्वीर पुरानो जापानी बगैंचा हो जसको नाम "केनरोकुएन" छ। यो बगैचा अनुभवी माली द्वारा धेरै राम्रो संग सम्भार गरिएको छ। जब जाडो नजिक आउँछ, रूखका हाँगालाई डोरीले बाँध्नुहोस् र माथिको फोटो जस्तो समर्थनमा क्लिप गर्नुहोस्। यो गरेर, तिनीहरूले हिउँको वजन संग टुक्राहरू बन्द गर्न कोशिस गर्दै छन्। कानाजावामा, "सुनको पत्ती" प्रविधि प्रयोग गरेर परम्परागत शिल्पहरू अझै बनेको छ। "सुन पत्ती" परम्परागत प्रविधि हो जुन कनाजावाले गर्व गर्छ। सुनको पातले ढाकिएको आइसक्रिम पनि कानाजावामा बेचिन्छ।
टोकियो बाट कानाजावा, सब भन्दा छिटो बुलेट ट्रेनको प्रयोग गरी २ घण्टा234 मिनेट एक तर्फ हो। कानाजावाबाट क्योटोका लागि, एक्सप्रेस ट्रेनको प्रयोग गरेर यसले २ घण्टा १० मिनेट लिन सक्दछ।
क्योटो एक सहर हो जुन १ Tok1869 yo मा टोकियोको राजधानी नहोउन्जेल करीव एक हजार बर्षको लागि जापानको राजधानी थियो। दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि हवाई आक्रमणले थोरै क्षति पुर्‍याएको थियो, त्यसैले अझै धेरै परम्परागत भवनहरू अझै छन्। त्यहाँ धेरै पुराना मन्दिर र मन्दिरहरू छन्, र ती पर्यटक आकर्षणको रूपमा भीड छन्। यदि तपाईं परम्परागत जापानी संस्कृति अनुभव गर्न चाहानुहुन्छ भने, म तपाईंलाई क्योटोमा जान सिफारिस गर्दछु।
यो द्रुत Shinkansen द्वारा टोक्यो देखि क्योटो गर्न २ घण्टा २० मिनेट लिन सक्दछ। ओसाकाबाट क्योटोका लागि शिन्कानसेनले १2मिनेट लिन र जेआरको एक्सप्रेस ट्रेनबाट करीव minutes० मिनेट लिन्छ।
क्योटोको दक्षिणमा, क्यारा भन्दा पुरानो परम्परागत शहर नारा रहेको छ। यो किन्टोत्सु एक्सप्रेस द्वारा क्योटोबाट नारासम्म 35 XNUMX मिनेट लिन्छ। यो तुलनात्मक रूपमा नजीक छ, यो पनि नारा यात्रा गर्न सम्भव छ।
डोटनबोरी मनोरन्जन जिल्ला। ओसनका जापान = शटरस्टकमा डोटनबोरी एक प्रमुख पर्यटन स्थल हो
ओसाका को नक्शा
टोकियो पछि ओसाका जापानको दोस्रो ठूलो शहर हो। जबकि टोकियो पूर्वी जापानको केन्द्र हो, ओसाका पश्चिमी जापानको केन्द्र हो। यद्यपि ओसाकाको जनसंख्या कम हुँदै गइरहेको छ र हालसालै जनसंख्या अनुसार यो टोकियोको छेउमा कानागावा प्रान्तमा पार भयो। जनसंख्याको तुलनामा ओसाका (लगभग 8.8. 13. मिलियन मानिस) जापानमा टोकियो (करीव १ 9.1 करोड मानिस) र कानागावा प्रान्त (करीव XNUMX .१ मिलियन मानिस) पछि तेस्रो ठूलो हो।
टोकियो ऐतिहासिक रूपमा एक राजनीतिक केन्द्रको रूपमा विकसित भएको छ, तर ओसाका लामो समयदेखि व्यापारीहरूको शहरको रूपमा विकसित भएको छ। त्यसोभए, ओसाका टोकियो भन्दा बढी नम्र छन्। व्यक्ति उज्ज्वल छन् र व्यावहारिक र स्वादिष्ट खाना प्रशस्त मात्रामा छ। यदि तपाईं ओसाका जानुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु असामान्य आत्मा खाना जस्तै Okonomiyaki, Takoyaki, याकिसोबा। त्यस समयमा सम्भवतः ओसाका टोकियो भन्दा बढी रमाइलो शहर हो।
टोकियो देखि ओसाका सम्म यो द्रुत Shinkansen द्वारा २ घण्टा minutes० मिनेट लिन सक्दछ। तपाईं टोकियोबाट ओसाका विमानमा जान सक्नुहुन्छ, तर यो Shinkansen प्रयोग गर्न बढी सुविधाजनक छ। यो क्योटोबाट ओसाका सम्म Shinkansen द्वारा १2मिनेट, र JR को एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा minutes० मिनेट लाग्छ।
हिरोशिमा को नक्शा
यदि तपाईं पश्चिमी जापानमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, म सिफारिश गर्दछु कि तपाईं मियाजीमा र हिरोशिमा शहर जानुहोस्। मियाजीमा हिरोशिमा शहरदेखि करीव २ km किलोमिटर पश्चिममा छ। मियाजीमा (आधिकारिक नाम "इट्सुकुशिमा" हो) करिब square० वर्ग किलोमिटरको सानो टापु हो जुन यसको भव्य इटुकुशिमा शिन्टो मन्दिरको लागि प्रसिद्ध छ। इट्सुकुशिमा तीर्थ क्योटोको फुशिमी इनारी मन्दिरको साथमा विदेशी पर्यटकहरूको बीचमा उच्च मूल्या .्कन गरिएको छ।
हीरोशिमा शहरमा, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु "हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम"। हिरोशिमा सहर हो जहाँ परमाणु बम दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा खसालिएको थियो। हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियममा त्यस समयमा धेरै सामग्रीहरू रहेको छ। संग्रहालयको नजिकैको छेउछाउमा परमाणु बम डोम पनि छ।
हिरोशिमा स्टेशन बाट मियाजीमा सम्म JR ट्रेन र फेरी प्रयोग गर्न सजिलो छ। तपाईं हिरोशिमा स्टेशन बाट मिआजिमागुची स्टेशन JR ट्रेन द्वारा जानुहुन्छ। यो मियाजीमागुची स्टेशन को लागी 30० मिनेट लाग्छ। यसले मियाजीमागुची स्टेशनदेखि फेरी टर्मिनल सम्म5मिनेट लिन सक्दछ। फेरी टर्मिनलबाट मियाजिमा सम्म, फेरीले लगभग १० मिनेट लिन सक्दछ।
यदि तपाईं क्युशुमा यात्रा गर्न चाहानुहुन्छ भने, म तपाईंलाई फुकुओका र युफुइनमा जान सिफारिस गर्दछु।
क्युशु जापानको पश्चिमी टापु हो। फुकुओका शहर, क्युशुको सबैभन्दा ठूलो शहर, क्युशुको उत्तरी भागमा अवस्थित छ। फुकुओका शहरको जनसंख्या १.1.58 मिलियन छ। यस शहरमा तपाईले राती अप्ठ्यारो स्टाल देख्न सक्नुहुन्छ। तपाई आत्मा खाना खान सक्नुहुन्छ जुन एकदमै स्वादिष्ट रामेन र याकिटरि स्टालमा। मलाई लाग्छ कि यो एक धेरै रमाईलो मेमोरी हुनेछ।
फुकुओकामा राती शहरको मजा लिइसकेपछि, अब युफुइन, तातो वसन्त रिसोर्टमा जाऔं जहाँ तपाईं सुन्दर ग्रामीण इलाकाको दृश्यहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ। तपाईं युफुइनमा JR एक्सप्रेस "Yufuin No Mori" फुकुओका शहरबाट (Hakata स्टेशन) बाट जान सक्नुहुन्छ।
युफुइनमा कुनै ठूलो होटल र रातो बत्ती जिल्ला छैन। यसको सट्टामा, त्यहाँ साना लक्जरी र्योकन (जापानी शैलीको होटलहरू), उच्च-सानदाराना किराना स्टोर र संग्रहालयहरू छन्। ग्रामीण दृश्यहरु साँच्चै सुन्दर छ। व्यक्तिगत र्योकन तातो स्प्रि .हरू पनि अद्भुत छन्। युफुइन खास गरी महिलाहरूको लागि लोकप्रिय छ जो शान्त ठाउँमा ताजा गर्न चाहन्छन्।
फुकुओका स्टल्स र युफुइनमा तातो स्प्रि Regarding्गहरूको बारेमा, मलाई लाग्छ कि निम्न दुई भिडियोहरू हेरेर तपाईं बुझ्नुहुनेछ।
शुरी महल, नाहा ओकिनावा जापान = शटरस्टकमा पुरानो महल स्थलचिन्ह
ओकिनावा प्रान्त जापानको दक्षिणी छेउमा छ। यसले ओकिनावा मुख्य टापु र धेरै टाढाका टापुहरू समावेश गर्दछ। यदि तपाईं ओकिनावा जानुहुन्छ भने, म तपाईंलाई शुरी क्यासल र एक्वेरियम जस्ता दर्शनीय स्थलहरू वरिपरि जान र समुद्री तटमा जान प्रोत्साहित गर्दछु।
ओकिनावा यात्राको आकर्षण भनेको सुन्दर समुद्री तटहरू बाहेक केही होइन। समुद्री तटहरू विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त छ। ओकिनावा प्रान्तको इशिगाकिजीमालाई २०१ Trip मा "ट्रिप सल्लाहकार" द्वारा प्रकाशित "लोकप्रिय राइजिंग साइटसि Ran रैंकिंग" मा विश्वको नम्बर १ मा नाम दिइएको थियो। व्यक्तिगत रूपमा, म मियाकोजिमाको सुन्दर समुद्री तटहरू पनि सिफारिस गर्दछु।
ओकिनावा दर्शनीय स्थलहरूको भ्रमण गर्न कार भाडा प्रयोग गर्न यो सुविधाजनक छ। मलाई लाग्छ कि किराया कारबाट ओकिनावा मुख्य टापुको पर्यटक आकर्षणहरू र त्यसपछि टाढाको टापुको अद्भुत समुद्रीतट यात्रा गर्नु यो उत्तम यात्रा हो।
ओकिनावाको समुद्री तटहरूका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
जापान एक टापु देश हो, र यो धेरै टापुहरु मिलेर बनेको छ। सफा समुद्र वरपर फैलिरहेको छ। यदि तपाईं जापान मा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं ओकिनावा जस्तो समुद्री तटहरूमा जानुहोस्। समुद्र किनारमा कोरल चट्टानहरू, र रंगीन माछा पौंडी पोखरीहरू छन्। स्नोर्कलिंगको साथ, तपाईं अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ ...